Vaovao HUAWEI: fandefasana, telefaona, takelaka sy maro hafa - Androidsis | Androidsis (Pejy 4)
Huawei Y7 Pro 2019, nanolotra ny sehatra fidirana vaovao miaraka amin'ny efijery lehibe sy bateria tsara kokoa
Huawei dia te-hamarana ny taona amin'ny alàlan'ny fanolorana telefaona vaovao miditra. Miresaka momba ny Huawei Y7 Pro 2019 izay miavaka amin'ny efijery sy ny bateriny izahay.
Huawei P Smart 2019: ny marika eo afovoany vaovao an'ny marika
Fantaro ny momba ny Huawei P Smart 2019, ilay telefaona antonony vaovao vaovao efa natolotr'i Huawei tamin'ny fomba ofisialy.
Manome sy mamoaka manokana ny famaritana Huawei Y7 (2019)
Roland Quandt dia namoaka ny sasany amin'ireo famaritana ara-teknika lehibe sy ny fandikana ny Huawei Y7 (2019), ny telefaona manaraka avy amin'ny orinasa.
Donald Trump dia te-hanakana ny varotra rehetra an'ny ZTE sy Huawei any Etazonia
Samy nahita i Huawei na i ZTE fa voarara ny varotra rehetra ny vokatra fifandraisan-davitra any Etazonia.
Ny Huawei P30 dia tsy haseho amin'ny MWC 2019
Huawei dia nanamafy ny fisiany ao amin'ny MWC 2019 fa ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety teo aloha dia hifantoka amin'ny teknolojia 5G, ka tsy hanolotra ny Huawei P30.
Huawei dia nihoatra ny telefaona 200 tapitrisa nalefa tamin'ny taona 2018
Fantaro bebe kokoa ny isan'ny telefaona nalefan'i Huawei eran'izao tontolo izao nandritra ny taona 2018 ary manadio ny fotoana tsara eo an-tsena.
Izany ve no volavolan'ny Huawei P30 Pro?
Ireo fandikana ireo dia mampiseho amintsika ny mety ho endrik'ilay Huawei P30 Pro, mpikambana manaraka amin'ny andiany P mpanamboatra Aziatika misy fakantsary 4 any aoriana.
Ny Huawei P30 dia hanana fakantsary telo miaraka amin'ny fanohanan'ny 5X Zoom tsy misy fatiantoka
Ny Huawei P30 dia hamely ny tsena miaraka amina fakantsary triple aoriana sy Zoom 5X tsy misy fatiantoka kalitao, araka ny tatitra vaovao vao nivoaka.
Huawei dia mikasa ny handefa fitaovana 250 tapitrisa amin'ny taona 2019
Huawei dia nanambara ny vinavinany ho an'ny 2019: manantena ny handefa fitaovana hatramin'ny 250 tapitrisa izy. Mampita ny vaovao aminao izahay.
Huawei dia nivarotra telefaona Nova maherin'ny 65 tapitrisa hatramin'ny 2016
Huawei dia nanambara fa, nanomboka ny taona 2016, dia namidy finday avo lenta Nova 65 tapitrisa mahery. Manitatra ny antsipiriany izahay.
Android 9 Pie dia tonga amin'ny Huawei P20, P20 Pro, Mate 10 ary Mate 10 Pro
Farany dia tonga ilay fanavaozana efa nandrasana nandrasana tamin'ny Android 9 Pie ho an'ny Huawei P20, P20 Pro, Mate 10 ary Mate 10 Pro. Aza mangataka andro hanana izany.
Huawei dia hiampita fandefasana 200 tapitrisa amin'ireo fitaovany alohan'ny faran'ny taona
Amin'ny 25 Desambra amin'ity taona ity dia mikasa ny efa nandefa smartphone 200 tapitrisa mahery i Huawei, araka ny vinavinany.
Tonga ny Huawei P Smart 2019 vaovao: ny kely indrindra ary ny chip Kirin 710 amin'ny 205 euro
Efa fantatsika ny antsipiriany rehetra momba ny Huawei P Smart 2019, telefaona iray izay tsy mihoatra ny 205 euro ary lafatra lafin-javatra izany.
Ireo mpiaro ny efijery Huawei P30 Pro dia manamarika fa ho avy izy io miaraka amina 'rano mitete'
Fivoahana vaovao iray no nanambara fa ho avy ny Huawei P30 Pro miaraka amina toerana misy rano. Izany dia notakiana noho ny fiparitahan'ny mpiaro ny efijeryo.
Ity no Huawei Nova 4 miaraka amina fakan-tsary tafiditra ao amin'ny efijery
Endri-javatra ao amin'ny Huawei Nova 4, finday avo lenta antonony vaovao avy amin'ny mpanamboatra Aziatika izay misongadina amin'ny fakantsary triple aoriana.
Araraoty ity tolotra Amazon ity hividy Huawei P20 Pro amin'ny vidiny tsara indrindra
Ankehitriny isika dia afaka mividy ny Huawei P20 Pro, iray amin'ireo finday avo lenta miaraka amin'ny fakantsary tsara indrindra eny an-tsena, amin'ny vidiny tsy azo haverina noho ny tolotra Amazon
Ity no Huawei Nova 4: lavaka eo amin'ny efijery, bezel vitsivitsy ary bebe kokoa momba ny haavo ambony manaraka
Nisy famoahana vaovao namoaka sary marobe an'ny Huawei Nova 4, taloha kelin'ny nanolorana azy sy hanombohana azy, izay amin'ny 17 Desambra.
Huawei FreeBuds 2: headphones vaovao an'ny marika
Fantaro bebe kokoa momba ny headphones tsy misy tariby an'ny marika sinoa, ny Huawei FreeBuds 2 izay efa natolotra tamin'ny fomba ofisialy tany Shina.
Huawei dia miasa amin'ny kaonty SuperCharge haingana mamaly haingana: ho tonga amin'ny 2019 izy io
Misy protokol Huawei vaovao mamaly haingana dia eo an-dalam-pandrosoana. Hanomboka amin'ny finday avo lenta ity iray ity amin'ny taona ho avy.
Ny teknolojia 5G an'ny Huawei dia mbola atokisan'ny firenena maro
Ny haitao sy rafitra 5G an'ny Huawei, ilay orinasa sinoa, dia mbola atokisan'ny firenena maro manerantany, araka ny filazan'i Sina.
Ity no ho fakantsary fakantsary mahery an'ny Huawei P30 Pro
Tranga maromaro no tafaporitsaka, ankoatran'ny fakantsary mety hitranga amin'ny Huawei P30 Pro, izay ahitantsika fa hametaka ny sensor Sony tsara indrindra
Misy antsipiriany misimisy momba ny fakantsary aoriana Huawei Nova 4: 48 MP ary maro hafa
Vao haingana izahay no nilaza taminao ny momba ny fitaovana Huawei manaraka, izay tsy iza fa ny Huawei Nova 4….
Huawei Ankafizo 9: ny ambaratonga fidirana vaovao an'ny marika
Huawei Enjoy 9: Famaritana, vidiny ary fanombohana. Fantaro misimisy kokoa ny momba ny fidirana vaovao amin'ny marika sinoa efa natolotra.
Noroahin'i Japon tamin'ny tetikasa 5G i Huawei sy ZTE noho ny antony ara-piarovana
Nanapa-kevitra i Japon ny Alatsinainy teo fa hanilika amin'ny fomba mahomby ny Huawei Technologies sy ZTE amin'ny fividianana ampahibemaso ireo tetik'asa 5G ao amin'ny firenena.
Ny Huawei P Smart (2019) dia hita ao amin'ny Geekbench miaraka amin'ny Android Pie
Ny Huawei P Smart (2019) dia mamakivaky ny Geekbench miaraka amin'ny Android 9.0 Pie ho toy ny rafitra miasa. Ianaro ny antsipirian'ny famoahana ity.
Avereno jerena i Huawei Mediapad M5 Lite, miaraka amin'i Stylus, izay tsy manana fialonana amin'ny iPad. Eny eny, ny vidiny!
Amin'ity tranga ity, ho fanampin'ny fitondrana anao ny fanadihadihana video feno momba ny Huawei Mediapad M5 Lite, takelaka Android vaovao ...
Manome voninahitra ny fampidirana finday fakan-tsary amin'ny fakan-tsary amin'ny volana Janoary
Jereo ny daty hanehoana ny telefaona Honor vaovao, izay ho tonga miaraka amin'ny fakan-tsary tafiditra ao amin'ny efijery.
Ny tsipiriany sy ny sarin'ny Huawei Enjoy 9 dia tafaporitsaka alohan'ny hanombohany
Ny Huawei Enjoy 9 dia tafaporitsaka tamin'ny sary niaraka tamin'ny famaritana ara-teknika azy. Io no ho fari-pahaizana mahazatra an'ny Enjoy 9 Plus.
Ny Huawei Nova 4 dia efa manana daty fampisehoana
Fantaro bebe kokoa momba ny fampisehoana ny Huawei Nova 4, telefaonan'ny marika sinoa miaraka amina fakan-tsary tafiditra ao amin'ny efijery izay hatao amin'ity volana ity.
Tonga any Espana amin'ny fomba ofisialy ny Huawei Mate 20 X
Fantaro bebe kokoa momba ny fanombohana ofisialy any Espana ny Huawei Mate 20 X, finday avo lenta an'ny lalao sinoa. Azo alaina amin'ity herinandro ity.
Voamarina: Huawei dia miasa amin'ny fomba hafa amin'ny Android
Ofisialy io: Huawei dia nanamafy fa miasa amin'ny rafitra fiasan'izy ireo manokana izy ireo, safidy iray hafa amin'ny Android. Jereo ny antony.
Ny Huawei Mate 20 Pro dia manao fitsapana fitsikilovana malaza indrindra
Jereo hoe amin'ny fomba ahoana ny Huawei Mate 20 Pro no miatrika ny fitsapana fiaretana JerryRigEverything. Fantaro raha mandalo ny fitsapana ny telefaona na tsia.
Huawei handefa ny telefaona voalohany misy lavaka eo amin'ny efijery: ho resy i Samsung amin'ny hazakazaka
Huawei dia manomana ny finday avo lenta voalohany misy lavaka eo amin'ny efijery: handresy an'i Samsung izy, orinasa iray hafa izay eo amin'ny hazakazaka ihany koa.
Huawei manakaiky kokoa an'i Samsung eo amin'ny tsena manerantany
Fantaro bebe kokoa ny fitomboan'ny varotra Huawei, izay manakaiky kokoa an'i Samsung amin'ity sehatry ny tsena ity.
Mandeha indray ny Huawei P Smart 2019, amin'ity indray mitoraka ity, miaraka amin'ny Kirin 710
Ny Huawei p Smart 2019 dia tafaporitsaka tao amin'ireo tambajotra niaraka tamin'ny Kirin 710 fototra miisa valo eo ambanin'ny saron-doha. Fantaro ny pitsopitsony rehetra!
Honor 10 Lite: ny marika afovoany vaovao an'ny marika
Fantaro bebe kokoa momba ny Honor 10 Lite, telefaona antonony vaovao izay efa natolotry ny marika sinoa tamin'ny fomba ofisialy tany Shina.
Huawei dia manoratra anarana maodely marobe ho an'ny telefaona ho avy
Huawei dia manoratra anarana maodely marobe momba ny finday finday Honor ho avy. Fantaro ny pitsopitsony rehetra amin'ity vaovao ity.
Huawei P Smart 2019: sary voalohany sy endri-javatra tafaporitsaka
Izahay dia mitondra anao ny endrika sy famolavolana ny Huawei P Smart an'ny 2019, telefaona vaovao avy amin'ny mpanamboatra Aziatika
Huawei dia manomana mpanampy feo marani-tsaina ho azy
Huawei dia miasa mandritra ny ora mba hitondrana mpanampy feo vaovao ho any an-tsena. Manitatra ny antsipiriany momba izany izahay.
Huawei miloka amin'ny fihetsika
Huawei dia manohy manatsara ny EMUI ary hanampy fanavaozana lehibe ho an'ny fifehezana ny fihetsika ho an'ny ankamaroan'ny fitaovany
Huawei dia handefa telefaona misy fakan-tsary eo alohan'ilay efijery
Huawe dia miasa amin'ny fampifangaroana fakan-tsary eo an-tampon'ny efijery, araka ny patanty vaovao navoakan'ny vaovao. Manome anao ny antsipiriany izahay.
Ny bandy Huawei's Band 3 Pro sy ny Band 3e Smart Wristband dia misy any Etazonia izao
Huawei dia mandefa ny fehin-tànana marani-tsaina an'ny Band 3 Pro sy Band 3e any Etazonia. Fantaro ny antsipiriany rehetra momba ny vidiny sy ny fisian'ireo.
Ny famolavolana ny HiSilicon Kirin 980 an'i Huawei dia naseho tamin'ny antsipiriany. Mianara momba ny SoC 7nm voalohany an'ny orinasa.
Huawei MediaPad M5 Youth: atolotra amin'ny fomba ofisialy ny takelaka vaovao
Takelaka vaovao no natomboka teny an-tsena, ary izy io dia ny Huawei MediaPad M5 Youth. Fantaro ny mampiavaka azy, ny miavaka sy ny vidiny.
Telefaona Huawei izay manavao ny EMUI 9.0 amin'ity herinandro ity
Fantaro hoe iza amin'ireo telefaona ao amin'ny katalaogin'i Huawei sy Honor no hanavao ity herinandro ity amin'ny Android Pie miaraka amin'ny EMUI 9.0. amin'ny fomba ofisialy.
Araraoty ireo tolotra Honor ireo ary mahazoa telefaona finday amin'ny vidin'ny 1 euro fotsiny
Raha mitady finday na smartband amin'ny vidiny lafo ianao dia tsy azonao hadinoina ny fotoana hanararaotana ireo tolotra Honor ireo mandritra ny tsingerintaona nahaterahany.
Fampivoarana mombamomba azy ireo sy ny masontsivana momba ny Honor V20, ny sainam-pirenena manaraka
Sivanina ireo fiasa sy famaritana fototra izay hoentin'ny Honor V20, ilay fitaovana manaraka avo lenta avy amin'ny orinasa.
Huawei dia nanambatra ho marika faharoa amidy faharoa
Huawei dia efa satro-boninahitra ho marika finday be mpividy indrindra eran'izao tontolo izao. Jereo hoe ohatrinona ny efa namidiny tamin'ny telovolana fahatelo.
Ny Honor Magic 2 dia ofisialy izao: ny farany avo lenta miaraka amin'ny écran slide
Honor Magic 2: famaritana, vidiny ary fanombohana. Fantaro misimisy kokoa momba ny haavo farany ambony an'ny marika sinoa izay efa natolotra tamin'ny fomba ofisialy.
Huawei dia tsy nanambara ny isa 20 an'ny DXOMark an'ny Mate XNUMX satria avo loatra izy ireo
Ny naoty DXOMark an'ny Huawei Mate 20 dia tsy nambara satria avo loatra. Mianara antsipiriany bebe kokoa.
Ny famolavolana ny Honor Magic 2 dia naseho taorian'ny horonantsary tafaporitsaka
Nisy video iray tafaporitsaka mampiseho ny famolavolana ny Honor Magic 2, ho fanampin'ny sary an-gazety samihafa mampiseho ny fakantsary mihetsiketsika azy.
Ny Huawei Mate 20 Pro dia mahazo isa avo kokoa noho ny an'ny Android rehetra ao AnTuTu
Ny Huawei Mate 20 Pro dia nandalo ary nahazo isa mihoatra ny 307K tamin'ny andrana AnTuTu, iray amin'ireo mari-pahaizana malaza indrindra.
Nanamafy ny tale jeneralin'ny Huawei fa miasa amin'ny telefaona mametaka azy ireo izy ireo izay haseho amin'ny taona 2019 ary hanana fifandraisana 5G izy io.
Ny EMUI 9.0 beta dia azo alaina modely Huawei sy Honor sivy
Huawei dia namoaka EMUI 9.0 miorina amin'ny Android 9.0 Pie ka hatramin'ny maodely telefaona Huawei sy Honor. Lazainay anao hoe inona izy ireo!
Tehirizo ny Huawei Mate 20 miaraka amin'i Orange ary alao maimaimpoana ny Huawei Watch GT
Huawei Mate 20 misy amin'ny Orange miaraka amin'ny Huawei Watch GT ho fanomezana. Jereo ity fampiroboroboana ity miaraka amin'ny Orange hatramin'ny 31 Oktobra.
Huawei Mate 20 sy Mate 20 Pro mifanohitra amin'ny fifaninanana
Taorian'ny tsaho maro volana, mahazatra rehefa miresaka terminal farany avo lenta, ny orinasa Aziatika dia nanolotra ny laharan'ny Mate 20. Amin'ny Androidsis dia ampitahainay amin'ny sisa amin'ireo safidy avo lenta eny an-tsena.
Huawei Mate 20X: famaritana, vidiny ary fanombohana. Fantaro bebe kokoa momba ny smartphone Huawei gaming vaovao natolotra izao.
Huawei Mate 20 RS Porsche Design: famaritana sy vidiny. Hijery misimisy kokoa momba ity kinova an'ny haavo Huawei ity efa natolotra.
Huawei Mate 20 sy Mate 20 Pro: Famaritana, vidiny ary fanombohana. Fantaro bebe kokoa momba ny telefaona farany ambony an'ny marika.
Ny Huawei Enjoy 9 Plus sy Enjoy Max dia nambara: endri-javatra, famaritana ary vidiny
Huawei dia nanambara ny Huawei Enjoy 9 Plus sy Enjoy Max, terminal vaovao antonony roa. Fantaro ny miavaka sy ny vidiny.
Ahoana ny fanarahana ny hetsika fampisehoana Huawei Mate 20
Ahoana ny fanarahana ny fampisehoana ny Huawei Mate 20. Fantaro bebe kokoa momba ny fampisehoana ny avo lenta ny marika sinoa.
Nampiseho ny vidiny sy ny datin'ny famoahana ny Huawei Mate 20 Pro any Eropa
Sivanina ny vidiny sy ny daty famotsorana ny Huawei Mate 20 Pro. Jereo bebe kokoa momba ny vidin'ny avo lenta any Eropa izay ho tonga amin'ity fararano ity.
Google Pixel 3 sy Pixel 3 XL, izany no mampitaha azy ireo amin'ny fifaninanana
Taorian'ny fanombohana ny Google Pixel 3 sy Pixel 3 XL, dia nitarina ny elanelam-potoana avo lenta ary sarotra kokoa ny mahita hoe iza no terminal izay mifanaraka amin'ny ilaintsika indrindra.
Hisy Huawei Mate 20X ho an'ny mpilalao
OFFICIAL: Hisy Huawei Mate 20X manokana ho an'ny mpilalao. Fantaro bebe kokoa momba ny telefaona vaovao hasehon'ny marika sinoa amin'ity hetsika ity.
Ny Huawei Mate 20 Pro no finday matanjaka indrindra amin'ity taona ity, araka ny fitsapana nataon'ny AnTuTu
Ny Huawei Mate 20 Pro dia nahazo isa tao amin'ny AnTuTu miaraka amin'ny naoty iray izay mametraka azy eo ambonin'ny terminal Android mahery indrindra. Manitatra anao izahay!
Ny Android Pie beta dia manomboka mahatratra ny Huawei P20 Pro any Eropa
Ny Huawei P20 Pro any Eropa dia mahazo ny Android Pie beta. Fantaro bebe kokoa momba ny fanavaozana ny telefaona amin'ity beta ity.
Ny Huawei Mate 20 dia mipoitra ao amin'ny Geekbench miaraka amin'ny Kirin 980
Huawei's Mate 20 dia mipoitra ao amin'ny Geekbench Benchmark miaraka amin'ny Kirin 980. Jereo ireo isa izay nanoratana azy tao anaty tahiry.
Huawei Y9 2019: ny elanelam-potoana vaovao an'ny Huawei
Huawei Y9 2019: famaritana, vidiny ary fanombohana ofisialy. Fantaro bebe kokoa momba ny telefaona vaovao avy amin'ny marika sinoa nampidirina androany.
Ny Kirin 980 dia ambony noho ny Apple A12 Bionic, hoy i Huawei
Huawei's Kirinj 980 dia ambony noho ny chipset Apple A12 Bionic, hoy ny orinasa sinoa. Hahafantatra bebe kokoa momba ity fanambarana marika ity.
Honor dia tsy hisaraka amin'i Huawei
Taorian'ny tsaho avy amin'ny haino aman-jery isan-karazany any Shina, voamarina fa hanohy hamorona vondrona orinasa tokana i Honor sy Huawei.
Namoaka horonantsary vaovao momba ny Huawei Mate 20
Navoaka ny horonantsary vaovao an'ny Huawei Mate 20. Jereo ny famolavolana farany ny marika avo lenta an'ny marika sinoa noho ity horonantsary tafaporitsaka ity.
Fampahafantarana vaovao momba ny Huawei Y9 (2019) navoakan'ny TENAA
Ny Huawei Y9 (2019) dia tafaporitsaka tao amin'ny TENAA niaraka tamin'ny famaritana ara-teknika lehibe azy. Fantaro ny antsipiriany rehetra amin'ity telefaona manaraka ity.
Ny beta faharoa an'ny Android Pie dia tonga amin'ny telefaona Huawei vaovao
Tonga amin'ny telefaona Huawei sy Honor ny Android Pie beta vaovao. Fantaro bebe kokoa momba ny beta vaovao izay mitondra fanatsarana sy fiasa vaovao.
Ny telefaona 5G voalohany an'ny Huawei dia azo ahodina
Ny telefaona Huawei voalohany misy 5G dia azo ahodina. Hijery misimisy kokoa momba ity telefaona ity avy amin'ny marika sinoa tonga eo amin'ny tsena amin'ny tapaky ny taona 2019.
Ny telefaona Huawei voalohany misy fanohanana 5G dia ho avy amin'ny taona ho avy
Huawei dia handefa telefaona 5G amin'ny tapaky ny taona 2019. Jereo bebe kokoa momba ny fandefasana an'ity telefaona sonia ity miaraka amin'i Kirin 980.
Huawei dia manamarina ny fakantsary telo sosona an'ny Mate 20 Pro
Voamarina: ny Huawei Mate 20 Pro dia hanana fakantsary aoriana telo. Fantaro bebe kokoa momba ny fakantsary avo lenta an'ny Huawei.
Telefaona Huawei vaovao roa no tafaporitsaka tao amin'ny TENAA
Smartphone roa Huawei no voasoratra anarana ao amin'ny TENAA. Jereo hoe inona no nomanin'ny orinasa sinoa ho antsika.
Ho tonga amin'ny taona 2019 ny telefaona mihetsika Huawei
Huawei dia handefa ny telefaona azo ovaina eny an-tsena amin'ny taona 2019. Fantaro bebe kokoa ny fahatongavan'ity telefaona sonia ity eny an-tsena.
Fampitahana eo amin'ny iPhone XS, iPhone XS Max, Galaxy Note 9, Galaxy S9 + ary Huawei P20 Pro,
Ny taranaka iPhone vaovao natolotra tamin'ny 12 septambra dia manery antsika hanao fampitahana amin'ny Android avo lenta ankehitriny
Ny Huawei Y9 (2019) dia voasivana ao amin'ny TENAA ary hita ny endriny
Vao namoaka tao amin'ny TENAA, masoivohon'ny Sinoa ny Huawei Y9 (2019). Jereo hoe inona no nomanin'ny orinasa aziatika ho antsika amin'ny taona ho avy.
Nanivana sary vaovao an'ny Huawei Mate 20 Pro
Sary voasivana vaovao amin'ny Huawei Mate 20 Pro. Fantaro bebe kokoa momba ny sary vaovao izay efa navoakan'ny havoana marika marika sinoa tonga tamin'ny volana oktobra.
Huawei P Smart +: ilay vaovao avy amin'ny Huawei miaraka amin'ny fakantsary efatra feno AI
Ny Huawei P Smart + dia ofisialy. Fantaro ny toetra sy ny teknika manokana momba ity terminal vaovao ity miaraka amin'i Kirin 710.
Ny Huawei Mate 20 Lite dia havoaka any Espana amin'ny 10 septambra. Fantaro bebe kokoa momba ny fahatongavan'ilay telefaona Huawei vaovao any Espana.
Ny telefaona Huawei sy Honor voalohany dia efa manana ny Android Pie beta. Jereo hoe iza amin'ireo modely efa manana an'ity beta ity miaraka amin'ny EMUI 9.
Ny Huawei P20 dia efa namidy singa maherin'ny 10 tapitrisa
Ny Huawei P20 dia nihoatra ny singa 10 tapitrisa namidy. Fantaro bebe kokoa momba ny varotra avo lenta an'i Huawei manerantany.
Ofisialy: Huawei dia hanolotra ny Mate 20 amin'ny 16 Oktobra any London
Huawei dia nanambara fa ny Mate 20 sy Mate 20 Pro dia haseho amin'ny 16 Oktobra any London. Jereo hoe inona no nomanin'ny orinasa ho antsika.
Ny Huawei Mate 20 Lite dia ofisialy izao. Fantaro ny momba ny telefaona vaovao an'ny marika miaraka amin'ny processeur an'ny kirin 710 an'ny marika.
Huawei dia manolotra an'i Kirin 980, mpikirakira matanjaka indrindra ao aminy. Fantaro ny momba ilay processeur high-end vaovao atolotra ao amin'ny IFA 2018.
Honor Magic 2: havaozina ny avo lenta
Honor Magic 2: nambara ny Honor vaovao avo lenta. Fantaro bebe kokoa momba ny fanambaràna ny telefaona marika sinoa vaovao.
Huawei dia voamarina ho mpanamboatra smartphone faharoa manerantany
Tamin'ny fiandohan'ny volana aogositra, samy nanolotra tarehimarika ara-barotra ofisialy ho an'ny telovolana roa i Apple sy i Huawei ...
Huawei dia nanambara ny programa Android 9.0 Pie beta ho an'ny telefaona 9. Fantaro bebe kokoa momba ity programa beta an'ny marika sinoa ity.
Huawei Mate 20 Lite amidy izao: famaritana ara-teknika sy ny vidiny
Ny Huawei Mate 20 Lite dia vao namidy tao amin'ny fivarotana an-tserasera fiaviana poloney. Fantaro ny miavaka sy ny vidiny!
Kirin 980 dia hanomboka amin'ny fandefasana amin'ny telovolana manaraka
Huawei dia hanomboka handefa ny Kirin 980 amin'ny telovolana farany. Fantaro bebe kokoa momba ny fahatongavan'ity fizotran'ny Huawei ity eny an-tsena.
Ho tonga miaraka amin'ny Android Pie ny Huawei Mate 20 sy Mate 20 Pro
Ny Huawei Mate 20 dia hanana Android Pie amin'ny toerana misy anao. Fantaro bebe kokoa momba ny rafitra fiasa izay hanana finday Huawei vaovao.
EMUI 9.0 miorina amin'ny Android Pie dia haseho ao amin'ny IFA 2018. Jereo bebe kokoa momba ny kinova vaovao an'ny sosona fanaingoana an'i Huawei.
Ny Huawei Mate 20 dia hanana fakantsary aoriana telo
Ny Huawei Mate 20 dia hanana fakantsary aoriana telo. Fantaro bebe kokoa momba ny haavo farany an'ny marika sinoa tonga amin'ny fararano.
Ny Huawei Nova 3 sy Nova Iza dia ho hita amin'ny volomparasy iris manomboka amin'ny herinandro ambony any India. Jereo!
Ny Huawei P20 Pro dia hanampy loko vaovao roa eo amin'ny elanelam-potoana ao amin'ny IFA 2018. Fantaro bebe kokoa momba ny kinova vaovao an'ny haavo farany an'ny marika sinoa
Ny Huawei Mate 20 Lite dia hitondra processeur Kirin 710. Fantaro bebe kokoa momba ny telefaona vaovao avy amin'ny mpanamboatra sinoa, izay tonga eto amintsika ny antsipiriany.
Huawei's Kirin 980 dia tsy hanana core Cortex-A77, fa ny Cortex-A76 an'ny ARM
Ny mpikirakira an'i Huawei manaraka, ny HiSilicon Kirin 980, dia tsy ho ampiasain'ny core efatra Cortex-A77, fa kosa misy core efatra Cortex-A76. Jereo!
Ny Huawei Nova 3 dia nivarotra singa roa tapitrisa tao anatin'ny iray volana
Ny Huawei Nova 3 dia mahatratra singa roa tapitrisa amidy. Fantaro bebe kokoa ny fahombiazan'ny maodely vaovao amin'ny marika sinoa.
Ho tonga amin'ny volana Oktobra ny Huawei Mate 20
Ny Huawei Mate 20 dia haseho amin'ny fomba ofisialy amin'ny volana oktobra. Fantaro bebe kokoa ny momba ny telefaona finday vaovao avy amin'ny mpanamboatra sinoa izay ho tonga amin'ity fararano ity.
Ny sivana teknika rehetra an'ny Huawei Kirin 980 dia voasivana
Ny famaritana ara-teknika an'ny processeur Huawei manaraka, ny HiSilicon Kirin 980, dia vao navoaka.
Ireo sary voalohany amin'ny Huawei Mate 20 Lite dia mampiseho ny fahaizany
Sivanina ny antsipirihany sy ny sarin'ny Huawei Mate 20 Lite. Fantaro bebe kokoa momba ny elanelam-potoana vaovao an'ny marika sinoa vaovao.
Huawei dia mizaha ny Android 9.0 Pie amin'ny findainy efatra
Huawei dia efa miasa amin'ny Android 9.0 Pie mandritra ny telefaona efatra. Fantaro misimisy kokoa momba ireo fanavaozana izay nomanin'ny marika sinoa.
Vola maherin'ny 10 tapitrisa amin'ny Huawei Mate 10. no namidy.Hahafantatra bebe kokoa momba ny varotra avo lenta amin'ny marika sinoa.
Fantaro ny famolavolana ny Huawei's Mate 20 Lite rehefa avy nandalo TENAA
Ny Huawei Mate 20 Lite dia nandalo ny TENAA ary nahazo ny fanamarinana. Misaotra an'io, efa fantatsika ny endrika ofisialy an'io. Atorinay anao!
Huawei no laharana faharoa amin'ny marika be mpividy indrindra eran-tany
Huawei dia mihoatra an'i Apple amin'ny varotra amin'ny telovolana faharoa. Fantaro bebe kokoa momba ny varotra ny mpanamboatra sinoa amin'ity telovolana faharoa eran-tany ity.
Volana vitsivitsy monja isika miala amin'ny hijerena ny teknolojia 5G amin'ny finday isan-karazany. Ireo mpanamboatra toa an'i Huawei dia efa nanambara miorina amin'ny fandefasana Huawei dia hampiasa rafitra mangatsiaka miorina amin'ny takelaka varahina hanaparitahana ny hafanana noho ny fanjifana ny tambajotra 5G.
Famaritana teknika marobe momba ny Huawei Mate 20 no voasivana noho ny firmware misy azy
Rehefa nandeha ny andro dia navotsotra ny antsipiriany sasany momba ny sainam-pirenen'ny orinasa sinoa Huawei, ny sasany miankina amin'ny firmware an'ny Huawei Mate 20 dia efa navoaka ora vitsivitsy lasa izay. Fantaro ny mombamomba ny teknika rehetra naseho!
Ny Huawei Mate 20 Pro dia hanana sensor ultrasonic sy tarehy 3D hamoha
Lazainay aminao ny antsipiriany vaovao izay nanjary mazava momba ny Huawei Mate 20 Pro vaovao
Kirin 980 dia azo aseho amin'ny 31 Aogositra
Kirin 980 dia haseho amin'ny 31 Aogositra ao amin'ny IFA 2018. Fantaro bebe kokoa momba ny daty fampisehoana mety an'ny processeur high-end an'ny Huawei.
Huawei P Smart +: ilay vaovao avy amin'ny orinasa misy fakantsary efatra sy Snapdragon 710
Huawei dia nanolotra ny P Smart +, finday avo lenta vaovao natao ho an'ireo tia sary. Ity fitaovana ity dia misy fiasa vitsivitsy izay entin'i Huawei ho antsika ny P Smart +, finday avo lenta vaovao misy ny fakan-tsarimihetsika misy fakan-tsary efatra sy Qualcomm Snapdragon 710.
Honor Play dia ho tonga any India amin'ny alàlan'ny Amazon manokana
Ho tonga any India ny Honor Play amin'ny volana ho avy izao ary fantatray izao fa amin'ny alàlan'ny Amazon ihany no hanaovany izany.
Huawei dia nahatratra finday 100 tapitrisa namidy. Fantaro bebe kokoa ny momba ny varotra marika sinoa hatreto amin'ity taona ity.
Ny iray amin'ireo mpanamboatra finday mijanona eo amin'ny tsena azo ampitaina dia ny orinasa sinoa Huawei. Raha marina fa mifantoka izy io, ny Huawei bebe kokoa kosa dia mitondra antsika amin'ny mpandimby ny TalkBand B3. Miresaka momba ny TalkBand B5 vaovao isika, ilay azo entina nanomboka ora vitsy lasa izay. Mahalalà azy!
Ny Huawei Nova Iza dia aseho. Ianaro ny momba ny finday voalohany amin'ny Kirin 3!
Ankoatry ny nanolorany ny Nova 3, ny farany avo lenta an'ny orinasa miaraka amin'ny SoC Kirin 970, dia nanambara kosa i Huawei fa ny Nova Izaz, ny salan'isa antonony miaraka amin'ny The Huawei Nova Iza dia naseho miaraka amin'ireo lafin-javatra sy ny antsipiriany rehetra. teknika. Manome anao ny antsipiriany momba ity fitaovana ity izahay!
Kirin 710: processeur vaovao vaovao an'ny Huawei
Kirin 710: havaozina ny processeur Huawei eo afovoany. Hijery misimisy kokoa momba ny fanodinana afovoany vaovao an'ny marika sinoa.
Huawei Nova 3: Famaritana, vidiny ary fanombohana ofisialy. Fantaro bebe kokoa momba ny telefaona vaovao an'ny marika sinoa, sarany antonony-
Ny Huawei Nova Iza dia mipoitra amin'ny Aliexpress mialoha
Ny Huawei Nova Iza dia tafaporitsaka tanteraka tamin'ny Aliexpress. Fantaro bebe kokoa momba ny telefaona afovoany vaovao avy amin'ny mpanamboatra sinoa.
Ny Huawei Mate 10 sy P20 dia hahazo GPU Turbo amin'ny volana Aogositra
GPU Turbo dia ho tonga amin'ny Huawei Mate 10 sy P20 amin'ny volana Aogositra. Fantaro bebe kokoa momba ny fahatongavan'ity fanavaozana ity amin'ny telefaona marika marika sinoa.
Huawei dia namoaka ny EMUI 8.1 ho an'ny Mate 10 sy Mate 10 Pro
Herinandro maromaro lasa izay dia nanambara i Huawei fa ny Mate 10 sy Mate 10 Pro dia hahazo EMUI 8.1 eo ambanin'ny Android 8.1 Oreo amin'ny tapaky ny volana amin'ity volana ity. Ankehitriny, ny Huawei efa nambara dia namoaka EMUI 8.1, ny sosona fanaingoana farany indrindra, eo ambanin'ny Android 8.1 Oreo ho an'ny Mate 10 sy Mate 10 Pro.
Ho tonga amin'ny 3 Jolay ny Huawei Nova 3 sy Nova Iza
Ny Huawei Nova 3 sy Nova Iza dia ho ofisialy amin'ny 3 Jolay. Fantaro bebe kokoa momba ny fahatongavan'ireto maodely ireto eny an-tsena.
Modely Huawei fito no efa nahazo EMUI 8.0 miorina amin'ny Android 8.0 Oreo
Vao haingana i Huawei no nanambara ny famoahana ireo fanavaozam-baovao ho an'ny maodely fito izay hampiditra ny EMUI 8.0 miorina amin'ny Android 8.0 Oreo. Nanambara ny Huawei fa ny 7 amin'ireo maodeliny dia hahazo EMUI 8 miorina amin'ny Android 8.0 Oreo. Mampita ny vaovao aminao izahay!
Ny Huawei P9 sy P9 Lite dia tsy hanavao ny Android Oreo
Tsy hisy Android Oreo ho an'ny Huawei P9 sy P9 Lite. Fantaro bebe kokoa momba ny fanavaozana ireo telefaona izay tsy ho tonga amin'ny farany.
Honor 10 GT, finday misy RAM 8GB sy processeur Kirin 970. Atolotray anao izany!
Manana ambaratonga vaovao vaovao isika! Ora vitsy lasa izay, Huawei dia nanolotra ny Honor 10 GT ho finday avo lenta voalohany misy memory 8GB RAM satria misy Honor 10 GT eto! Ity fitaovana ity dia miavaka indrindra amin'ny finday voalohany an'ny orinasa manana RAM 8GB. Ankoatr'izay, manana GPU Turbo izy.
Ny Huawei Nova 3 dia haseho amin'ny 18 Jolay
Voamarina: Hiseho amin'ny 3 Jolay ny Huawei Nova 18. Fantaro bebe kokoa momba ny fanombohana ny telefaona marika sinoa vaovao.
Huawei dia efa manana mpandimby ny Nova 2, ny eo anelanelany dia natomboka tamin'ny taona lasa, ary mazava ho azy fa ny Huawei Nova 3. Ity fitaovana ity dia efa tafaporitsaka tao amin'ny TENAA Ny Huawei Nova 3 dia namakivaky ny TENAA ary efa fantatsika ny famolavolana sy endri-javatra lehibe. Lazainay aminao!
Ny Huawei Y5 (2018) dia misy any Espana izao. Fantaro bebe kokoa momba ny fanombohana ny telefaona marika sinoa vaovao eto amintsika.
Ny fanavaozana Huawei P10 Lite sy Mate 10 Lite amin'ny Android 8.0 Oreo
Android 8.0 Oreo dia tonga amin'ny Huawei P10 Lite sy Mate 10 Lite. Fantaro bebe kokoa momba ny fanavaozana izay manomboka mahatratra ny telefaona mpanamboatra.
Huawei dia nanambara ny fametrahana ny teknolojia GPU Turbo sy ny lisitry ny fitaovana izay hotohanana
Huawei dia nanambara ny teknolojia GPU Turbo tamin'ny fiandohan'ity volana ity. Ity haitao ity, izay miorina amin'ny fanatsarana ny rindrambaiko sy ny fitaovana, Huawei dia manamafy ny fametrahana ny teknolojia GPU Turbo amin'ny alàlan'ny fanavaozana izay misy ireo finday Huawei sy Honor.
Huawei dia hanavao ny findainy isaky ny roa volana
Mampanantena i Huawei fa hanavao ireo findainy isaky ny roa volana. Fantaro bebe kokoa momba ny fampanantenan'ny marika hanavao ireo fitaovany.
Huawei dia hanavao finday fito amin'ny Android Oreo
Telefaona Huawei sy Honor fito no hanavao ny Android Oreo. Fantaro bebe kokoa momba ireo maodely vaovao izay hahazo ity fanavaozana ity.
Huawei dia handefa ny telefaona 5G voalohany amin'ny Jona 2019
Ny telefaona Huawei voalohany misy 5G dia ho tonga amin'ny Jona 2019. Fantaro bebe kokoa momba ity telefaona izay tadiavin'i Huawei hanosika 5G ity.
Huawei dia efa miasa amin'ny processeur vaovao Kirin 1020
Kirin 1020: ny processeur Huawei ho an'ny avo lenta. Hijery misimisy kokoa momba ny processeur vaovao an'ny marika sinoa ho an'ny farany avo lenta.
Ny andian-dahatsoratra Huawei's Mate 10 dia mampiditra ny famohana ny tarehy
Ny andian-dahatsoratra Huawei Mate 10 dia nahazo fanavaozam-baovao izay azontsika atao ny mamoha ny terminal amin'ny tarehy
Ny Huawei P9 dia tsy hanavao ny Android Oreo
Ny Huawei P9 dia tsy hahazo ny fanavaozana ny Android Oreo. Fantaro bebe kokoa momba ity fanovana ny drafitry ny orinasa ity izay tsy ampoizina amin'ity fanapahan-kevitra ity.
Ny Huawei Mate 10 dia afaka mirakitra feo mihetsika miadana amin'ny alàlan'ny fanavaozana azy manaraka
Ny Huawei Mate 10 dia havaozina amin'ny hetsika miadana. Jereo hoe inona ny fiasa vaovao hahatratra ny farany amin'ny fanavaozana vaovao.
Huawei dia nivarotra singa enina tapitrisa tamin'ny Huawei P20
Ny Huawei P20 dia namidy singa enina tapitrisa tao anatin'ny telo volana. Fantaro bebe kokoa momba ny varotra avo lenta vaovao an'ny Huawei manerantany.
Manantena ny hivarotra telefaona 200 tapitrisa i Huawei amin'ity taona ity
Huawei te-hivarotra telefaona maherin'ny 200 tapitrisa amin'ny taona 2018. Jereo bebe kokoa ny tanjon'ny varotra an'ny marika sinoa.
Samsung dia hanao ny efijery OLED an'ny sainan'i Huawei manaraka ary izany dia hanana 6,9 santimetatra
Avy any Korea atsimo nisy vaovao tafaporitsaka izay manamafy fa Samsung dia hanamboatra tontonana 6,9-inch ho an'ny sainan'i Huawei manaraka
Avereno jerena ny Huawei P20 PRO
Aorian'ny herinandro mahery fampiasan-kery mahery dia izao ny famerenana video an'ny Huawei P20 PRO izay ilazako aminao ny tsara sy ny zava-dratsy rehetra atolotry ny sainam-pirenen'i Huawei ho antsika.
Unboxing sy ny fahatsapana voalohany an'ny Huawei P20 PRO
Unboxing sy ny sary mihetsika voalohany an'ny Huawei P20 PRO, ny tampon'ny Huawei range izay mamely azy amin'ny lafiny rehetra.
Huawei Enjoy 8e: ny farany ambany farany an'ny orinasa miaraka amin'ny Android 8.1 Oreo
Huawei dia mitondra antsika ny Huawei Enjoy 8e, finday avo lenta ambany vaovao avy any Azia miaraka amin'ny Android OS farany. Ity finday ity dia miaraka amina toetra maloto, izay ahatongavan'ny fisian'ny tontonana manana endrika 18: 9 ahazoana aina izay ankafizintsika indrindra.
Huawei Y5 Prime 2018: Ny telefaona vaovao amin'ny faritra Y
Huawei Y5 Prime 2018: famaritana, vidiny ary fanombohana. Fantaro bebe kokoa momba ny telefaona vaovao avy amin'ny marika sinoa nahatratra ny sehatra ara-toekarena indrindra.
Huawei Y3 (2018) voalaza manokana
Huawey Y3 (2018): telefaona Huawei voalohany miaraka amin'ny Android Go. Fantaro bebe kokoa momba ny telefaona marika sinoa voalohany nampiasa Android Go.
Huawei / Honor mandefa Android Oreo Beta ho an'ny maodely 7
Ny orinasa Huawei dia nanokatra ny programa Android Oreo beta ho an'ny terminal 7, izay misy koa maodely Honor, marika faharoa an'ny orinasa.
Ny Huawei P20 Pro dia mandalo fitsapana fiaretana malaza indrindra
Ny Huawei P20 Pro dia mandalo fitsapana fiaretana JerryRigEverything. Fantaro raha mijoro amin'ny fitsapana malaza indrindra amin'ny Internet ny avo indrindra.
Fantaro bebe kokoa momba ny varotra Huawei P20 Pro any Eropa Andrefana izay nahombiazany tamin'ny marika sinoa tamin'ny resaka varotra.
Huawei dia niasa tamina rafitra fandidiana hafa ho an'ny Android
Huawei dia namolavola ny rafitra fiasany manokana. Hijery misimisy kokoa momba ny drafitry ny marika Sinoa izay namorona ny rafitra fiasany manokana.
Huawei dia nanambara fa manana 74.326 XNUMX patanty voasoratra anarana izy ireo
Huawei dia manana patanty 74.326 voasoratra manerantany. Fantaro bebe kokoa momba ny patanty ny marika sinoa nanangana ny tenany ho marika mitarika amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana.
Huawei diahadihadiana any Etazonia
Manadihady momba an'i Huawei i Etazonia ankehitriny. Fantaro bebe kokoa momba ny fanadihadiana izay iharan'ny orinasa any Etazonia noho ny asa nataony tamin'i Iran.
Huawei dia tsy mikasa ny hivarotra ny mpikirakira Kirin amin'ny marika hafa
Huawei dia tsy hivarotra mpikirakira Kirin amin'ny marika hafa. Fantaro bebe kokoa momba ny fanapaha-kevitr'ilay orinasa sy ny antony tsy itiavany mivarotra ny solo-dry zareo amin'ny orinasa hafa.
Huawei Y6 2018 sy Huawei Y7 2018: famaritana, vidiny ary fanombohana. Fantaro bebe kokoa momba ireo telefaona Y-range vaovao avy amin'ny marika sinoa naseho androany.
Ny Huawei P20 Pro vaovao dia mahazo 4 amin'ny 10 amin'ny fanamboarana araka ny iFixit
Tamin'ny alàlan'ny tanan'ireo iFixit, nandalo fotsiny ny Huawei P20 Pro, terminal izay vao nahazo isa izay tsy nahazatra antsika.
Huawei dia hanomboka famokarana betsaka ny Kirin 980 amin'ity telovolana ity. Fantaro misimisy kokoa momba ny drafitry ny mpanamboatra sinoa miaraka amina processeur avo lenta vaovao.
Isaky ny ampidirina amin'ny tsena ny terminal vaovao, ny wallpaper dia iray amin'ireo endrika tena tadiavina. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny vola rehetra an'ny Huawei P20 hahafahanao misintona azy amin'ny fitaovanao.
Huawei dia nanaparitaka telefaona azo ahodina izay lasa takelaka
Huawei dia nanala paty finday miovaova izay miova ho takelaka. Fantaro bebe kokoa momba ny patanty ny marika sinoa miasa amin'izao karazana finday izao izay tokony hamely ny tsena tsy ho ela.
Ny tsikombakomba amin'ny Huawei P20 dia ho tonga amin'ny Mate 10 sy Mate 10 Pro
Ny Mate 10 sy Mate 10 Pro dia hanana ny fahaizan'ny artifisialy Huawei P20. Fantaro bebe kokoa momba ireo telefaona finday avo lenta izay hahazo an'io tsikombakomba artifisialy io.
Hihaona amin'ny Huawei Y7 Prime (2018), mpikambana vaovao amin'ny elanelam-potoana ambany ambany amin'ny orinasa
Izahay dia manolotra ny Huawei Y7 Prime (2018), fantsona iray izay fenoina famaritana sy fiasa mendrika ho matanjaka, nefa, miaraka amin'izay, ny smartphone iray ara-toekarena izay, raha tsy misy resaka, dia handray ampahany lehibe amin'ny tsena ao faritra io. Mampita ny vaovao aminao izahay!
Huawei P20 Lite: famaritana, vidiny ary fanombohana. Fantaro bebe kokoa momba ny elanelam-potoana vaovao an'ny marika sinoa izay efa natolotra tamin'ny fomba ofisialy tamin'io hetsika io.
Huawei P20, P20 Pro: Famaritana, vidiny ary fanombohana. Hijery misimisy kokoa momba ireo finday avo lenta vaovao an'ny marika sinoa izay efa natolotra tamin'ny fomba ofisialy.
Ahoana ny fomba hijerena mivantana ny fampisehoana Huawei, mihaona amin'ny Huawei P20, P20 Pro, P20 Lite vaovao sy maro hafa
Ity misy rohy mivantana amin'ny streaming mba hijerena ny fampisehoana ny Huawei mivantana avy any Paris, fampisehoana iray izay hahafantarantsika ireo maodely vaovao amin'ny andiany P amin'ny marika sinoa malaza. Ka afaka mahita mivantana ny fampisehoana ny Huawei P20, P20 Pro ary P20 Lite vaovao isika.
Huawei no marika be mpividy indrindra any Espana amin'ity taona ity
Huawei no marika be mpividy indrindra any Espana amin'ny taona 2018. Fantaro bebe kokoa momba ny varotra ny marika eo amin'ny tsena nasionaly sy ny anjarany hatreto.
Na Samsung na Apple: ny smartphone voalohany misy 512 GB dia tsy ho an'i Huawei
Ny zava-drehetra dia toa manondro fa izy io dia Huawei, mpanamboatra voalohany, indray mandeha indray, handefa terminal misy tahiry 512 GB eny an-tsena.
Huawei Nova 3e: ny vaovao eo anelanelan'ny marika
Huawei Nova 3e: Famaritana, vidiny ary fanombohana. Fantaro bebe kokoa momba ny elanelam-potoana vaovao an'ny marika sinoa izay efa natolotra tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny firenenao.
Navoaka ny vidin'ny Huawei P20 sy Huawei P20 Pro
Nambara ny vidin'ny Huawei P20 sy Huawei P20 Pro.Hahafantatra bebe kokoa momba ny vidiny efa navoaka ho an'ireo finday avo lenta an'ny marika sinoa.
Huawei dia mampitaha ny fakantsary P20 amin'ny DSLR amin'ny doka fampiroboroboana voalohany
Ny orinasa Aziatika Huawei dia nanomboka nanao vava tamin'ny fanambarana vaovao roa izay ampitahaina amin'ny fakantsary DSLR nentim-paharazana ny P20.
Ny fanavaozana Huawei P10 sy P10 Plus ho an'ny Android 8.0 Oreo
Android 8.0 Oreo tonga amin'ny fomba ofisialy amin'ny Huawei P10 sy P10 Plus. Fantaro bebe kokoa momba ny fanavaozana izay tonga amin'ny telefaona farany ambony roa an'ny marika sinoa.
Ny Huawei P20 Lite dia efa amidy any Italie amin'ny vidiny 369.90 euro ary ireo no fampidirana azy
Ny Huawei P20 Lite dia efa azo amidy any Italia amin'ny vidiny ambany 369 Euros, ary amidy any Polonina koa sahabo ho 380 euro eo amin'ny fifanakalozana. Ity terminal ity dia misy fitaovana maromaro voalaza etsy ambony, toy ny notch. Jereo!
Atolotray anao ny Huawei Nova 2 Lite, ilay eo anelanelan'ny vaovao miaraka amin'ny fanekena ny tarehy
Huawei dia nanolotra ny Nova 2, telefaona misy famaritana sy fiasa mendrika finday Android antonony. Ity fitaovana ity dia naseho tany Filipina, toerana nofidian'ny orinasa Aziatika izay efa nekena be teo amin'ny tsena hatry ny ela. Atolotray anao izany!
Sary voasivana tamin'ny maodely sy loko Huawei P20
Huawei P20, P20 Pro ary P20 Lite: Hihaona amin'ny endrik'izy ireo. Fantaro bebe kokoa momba ny volavola sy ny loko izay hamelezan'ny telefaona finday avo lenta an'i Huawei eny an-tsena.
Huawei dia nanolotra ny Honor 7C, elanelam-potoana izay misy fàfana HD + 5.99-inch amin'ny endrika 18: 9, Qualcomm Snapdragon 450 SoC miisa valo fototra, ary amin'ny kinova roa: RAM 3GB misy 32GB an'ny ROM, ary 4 / 64GB hafa. Fantaro ny miavaka rehetra!
Huawei Y9 2018: famaritana, vidiny ary fanombohana. Fantaro bebe kokoa momba ny telefaona afovoany vaovao amin'ny marika sinoa. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy ary natomboka ihany koa tany Thailandy.
Ny wallpaper Huawei P20 dia voasivana alohan'ny fampisehoana azy ireo
Telo herinandro talohan'ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny Huawei P20 sy ny karazany isan-karazany, ilay tompon'andraikitra ofisialin'ny tontolon'ny Android, i Ewan Blass dia nanivana ireo sary tamin'ny famahana azy ireo tany am-boalohany.
Ny Huawei P20 dia hanana kinova Porsche Design
Huawei P20 Porsche Design: ny kinova manokana an'ny telefaona. Fantaro bebe kokoa momba ity telefaona fanontana voafetra ity izay ny vidiny dia hihoatra ny an'ny Galaxy S9 na iPhone X eny an-tsena.
Huawei dia mitondra faharanitan-tsaina artifisialy any amin'ny faritra afovoany ambany. Fantaro bebe kokoa momba ny drafitry ny orinasa sy ny fomba ampiasan'izy ireo izany.
Tonga ao amin'ny TENAA ny Huawei P20 Lite ary manome antsipiriany misimisy kokoa momba izany
Ny Huawei P20 Lite dia efa tafaporitsaka tao amin'ny mpandrindra sy mpanamarina TENAA vao tsy ela akory izay, nanasongadinana endrika sy famaritana maromaro izay tafaporitsaka teo aloha. Manome anao ny antsipiriany izahay!
Ny sary fampiroboroboana ny andian-dahatsoratra Huawei P20 dia manambara fakan-tsary triple aoriana sy sary nohetezana eo aloha
Sary fampiroboroboana vaovao an'ny andian-dahatsoratra Huawei P20 dia mampiseho fandaminana fakantsary miisa telo any aoriana. Io ve no tena firafitr'ireo fitaovana ireo?
Ny Huawei Honor 7C dia hasehon'ny orinasa Sinoa ny 12 martsa izao. Nampahafantarina izany noho ny fivoahan'ny tsikombakomba farany izay ahitantsika ny haben'ny efijery sy ny daty fampisehoana izay tsy dia lavitra loatra isika, fa afaka dimy andro sisa. Jereo!
Huawei koa te hanana mpanampy azy manokana
Araka ny voalazan'i Bloomberg, ny orinasam-pifandraisan-davitra Huawei dia miasa amin'ny mpanampy azy manokana, mpanampy iray izay any amin'ny faritany sinoa ihany no hanombohany.
Sivanina ny famaritana, ny vidiny ary ny volavolan'ny Huawei P20 Lite
Huawei P20 Lite: mivoaka ny famaritana, ny vidiny ary ny famolavolana. Fantaro bebe kokoa momba ny telefaona vaovao avy amin'ny marika sinoa haseho amin'ity volana ity.
Sary vaovao an'ny Huawei P20 tafaporitsaka ary manana endrika tsara izahay
Huawei MateBook X Pro: Ny solosaina finday voalohany misy efijery tsy misy rafitra. Hijery misimisy kokoa momba ny solosaina finday marika Sinoa naseho tao amin'ny MWC 2018.
Huawei MediaPad M5: Taranaka fahefatra amin'ny takelaka Huawei
Huawei MediaPad M5: Famaritana, vidiny ary fanombohana MWC 2018. Hahafantatra bebe kokoa momba ny takelaka vaovao an'ny marika sinoa natolotra tao amin'ny MWC 2018.
Ireo no masontsivana momba ny Huawei FLA-AL10 sy FLA-AL00 araka ny filazan'ny TENAA
Huawei, ilay orinasa aziatika monina any Shina, dia toa nanadino ny endrik'ilay efijery 16: 9, ary miaraka amin'ny Huawei FLA-AL10 sy FLA-AL00, fitaovana roa izay tafaporitsaka tao TENAA ny filokana, dia miloka amin'ny takelaka 18 izy ireo: Famaritana 9. Lazainay anao daholo ny momba azy ireo!
Ny Huawei Honor 7C dia toa voasivana niaraka tamin'ny toetra mampiavaka azy sy ny mombamomba azy noho ny TENAA, ilay mpanamarina sinoa handaloana ny telefaona rehetra izay hamidy amin'ny firenena. Lazainay aminao ny antsipiriany!
Ny Huawei Enjoy 8 dia mahazo ny fanamarinana ny TENAA ary ireto no masontsivana ao anatiny
Manakaiky ny Kongresy Iraisam-pirenena Momba ny Finday any Barcelona, ​​ary ho eo i Huawei miaraka amin'ny fitaovana vaovao marobe izay havoaka amin'ny hetsika voalaza fa, na izany aza, ny orinasa Aziatika dia mifantoka amin'ny terminal hafa izay ho hitantsika any aoriana, toy ny Huawei Enjoy 8 , finday iray izay efa fantatsika ny mampiavaka azy.
Mampiseho aminao ny sary tena izy voalohany izahay amin'ny Huawei P20 Lite miaraka amin'ny antsipiriany rehetra
Ny sary voalohany amin'ny Huawei P20 dia voasivana miaraka amin'ny notch sy tsy misy sisintany
Iray volana talohan'ny daty fampisehoana nomanina ny Huawei P20, nisy sary iray vao tafaporitsaka izay ahalalana fa hanao ahoana ny ho avin'ny Huawei manaraka
Ny Honor 8 sy 7X dia hahazo Android 8.0 Oreo ... Ary alohan'ny fahavaratra!
Ny Huawei Honor 8 sy 7X, hoy i Honor France, dia hahazo Android 8.0 Oreo ambanin'ny EMUI 8 alohan'ny fahavaratra izay efa manakaiky. Vaovao tsara izany satria nilaza ny mifanohitra amin'izany ny Honor India. Manitatra anao izahay!
Nanala sarona ny famolavolana ny Huawei P20 noho ireo fonony
Huawei P20: sivana ny firafitr'ilay fitaovana amin'ny fonony. Fantaro bebe kokoa momba ny famolavolana ny haavo farany ambony an'ny marika sinoa, izay efa fantatra noho ny fonony.
Raiso ny Honor 6X amin'ny vidiny lafo ao amin'ny LigthInTheBox
Ny Huawei Honor 6X dia amin'ny tolotra tsy mampino sy tsy azo ihodivirana ao amin'ny magazay an-tserasera LighInTheBox mandritra ny fotoana voafetra. Azonao atao ny mividy azy amin'ny vidiny mora azo eo amin'ny $ 189.99, izay, amin'ny euro, dia hitovy amin'ny 152 euro eo ho eo. Araraoty!
Ianaro ny loko izay hamelezan'ny Huawei P20 ireo magazay. Tonga eo an-tsena tsy ho ela ny haavo farany ambony an'ny marika sinoa, efa fantatsika ny lokony.
Ny fanombohana ny Huawei P11 dia azo ahemotra mba tsy hifaninana amin'ny Galaxy S9 sy S9 +
Ny Huawei P11 dia tsy afaka tonga nandritra ny MWC 2018 fa niseho tamin'ny volana aprily, fantaro ny antsipiriany rehetra momba ny fahatarana tsy nampoizina
Huawei P Smart: Famaritana voamarina momba ity elanelam-potoana mampanantena ity
Huawei P Smart: Voamarina ny famaritana, ny vidiny ary ny fandefasana. Fantaro bebe kokoa momba ity telefaona antonony ity izay hamely ny tsena ao anatin'ny tapa-bolana.
Ho tonga any Etazonia amin'ny 10 Janoary ny Huawei Mate 9 Pro
Huawei dia hanatrika ny CES any Las Vegas miaraka amin'ny Huawei Mate 10 Pro, telefaona izay ho tonga amin'ny fomba ofisialy any Etazonia amin'ity talata 9 janoary ity.
Ny Huawei Enjoy 7S dia havoaka manerantany ho Huawei P Smart
Huawei P Smart: ny anarana iraisam-pirenena an'ny Huawei Enjoy 7S. Fantaro bebe kokoa momba ny fanombohana iraisam-pirenena ny maodely Huawei.
Ireo finday izay havoakan'i Huawei amin'ny taona 2018 dia efa fantatra. Fantaro bebe kokoa momba ireo fitaovana izay hanombohan'ny marika amin'ny taona ho avy.
Nokia sy Huawei dia nahavita fifanarahana momba ny patanty hiaraha-miasa, fifanarahana sahala amin'ny an'ny orinasa finnish miaraka amin'i Xiaomi
Ny Huawei P10 sy P10 Plus dia manomboka mahazo Android Oreo
Ny terminal farany Huawei nahatratra ny tsena, ny elanelam-P10, dia nanomboka nahazo Android Oreo, tany Chine tamin'ny voalohany
Ny Huawei Enjoy 7S dia ofisialy izao: fantaro ny fampiasa azy
Huawei mankafy 7S: famaritana, vidiny ary fanombohana ofisialy. Fantaro misimisy kokoa momba ilay fitaovana Huawei vaovao sy ny andinindininy.
Sary navoakan'ny Huawei navoakan'i P11
Voasivana ny antsipiriany sy ny fiasa vaovao amin'ny terminal Huawei manaraka. Ity no Huawei P11, avo lenta izay ho avy miaraka amin'ny famaritana miavaka.
Voasivana ny fepetra voafaritry ny Huawei Enjoy 7S vaovao
Toy ny mahazatra, ny terminal farany izay nahita ny filan-keviny voasivana alohan'ny fampisehoana azy dia ny Huawei Enjoy 7S
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay aminao ny fomba ahafahantsika misintona ireo sary mihetsika rehetra izay avy amin'ny Huawei Mate 10 Pro
Huawei Nova 2S ofisialy ofisialy dia naseho
Ianaro ny mombamomba ny Huawei Nova 2S. Fantaro misimisy kokoa momba ny phablet vaovao an'ny marika sinoa izay hipoitra tsy ho ela ny tsena.
Ny sary voalohany sy ny toetran'ny Huawei Nova 2S dia voasivana
Ilay andiany Huawei Nova malaza dia saika handray mpikambana vaovao iray hafa: ny Huawei Nova 2S, finday avo lenta izay mampanantena ho terminal mahery.
Ny sary voalohany amin'ny Huawei P11 Plus dia voasivana
Volana maromaro talohan'ny nanolorana azy dia vao tafaporitsaka tao amin'ny tambajotra sosialy Weibo ny sary voalohany an'ny Huawei P11 Plus
Huawei Enjoy 7S: ny terminal manaraka misy fakan-tsary 18: 9 sy fakan-tsary roa
Huawei dia nanomana fantsona vaovao ho antsika miaraka amin'ny efijery 18: 9 saika tsy misy bezela sy fakan-tsary indroa. Ity no Huawei Enjoy 7S. Mbola fantatrao ve izy?
Huawei Mate 10 Lite voafaritra naseho
Huawei Mate 10 Lite: Voamarina ny fepetra. Fantaro bebe kokoa momba ny telefaona vaovao an'ny Huawei, ny Maimang 6.
ZTE no orinasa voalohany nanambara ny finday avo lenta azo zahana, ny ZTE Axon M, saingy i Huawei dia afaka nampiditra finday misy efijery roa amin'ny 2018.
Ny Huawei Mate 10 Pro dia mandresy ny iPhone 8 sy Note 8 miaraka amin'ny fakantsary roa
Ny Huawei Mate 10 Pro dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity herinandro ity ary ny DxOMark dia efa nanao fitsapana hanamarinana ny kalitaon'ny fakantsary.
Jereo ny fepetra voafaritra, ny vidiny ary ny daty misy ny Huawei Mate 10 vaovao sy Huawei Mate 10 Pro miaraka amin'ny RAM hatramin'ny 6 GB.
Ho tonga ny Huawei Mate 10 miaraka amina fiasa mitovy amin'ny Continuum an'ny Windows Phone
Rafitra toy ny Windows Phone Continuum dia mety ampiasain'i Huawei ao amin'ny sainam-bolan'ny Mate 10 sy Mate 10 Pro vaovao.
Huawei Mate 10 Pro, namoaka ireo sary voalohany
Ny sary voalohany amin'ny Huawei Mate 10 Pro dia voasivana, ny sainam-pianakaviana vaovao an'ny fianakavian'i fbarica aziatika izay miverina miloka amin'i Leica.
Mampiseho telefaona mahatalanjona ireo sary vaovao manome ny Huawei Mate 10
Ny sary farany manome ny Huawei Mate 10 dia mampiseho ny aloha sy ny aorian'ny terminal, izay misy fakan-tsary roa sy mpamaky ny dian-tànana.
Huawei dia miantoka fa ny Mate 10 sy Mate 10 Pro manaraka dia ho tonga miaraka amin'ny processeur Kirin 970, izay manome haitao vaovao sy fampisehoana miavaka.
Ny Huawei Mate 10 sy Mate 10 Pro dia haseho amin'ny 16 Oktobra miaraka amin'ny processeur vaovao Kirin 970
Ny Huawei Mate 10 sy Mate 10 Pro dia haseho amin'ny 16 Oktobra ao Munich ary hampiditra ny processeur vaovao Kirin 970 misy fahaiza-manao AI.
Huawei Nova 2, fahatsapana voalohany
Fihetseham-po voalohany tamin'ny sary taorian'ny fitsapana ny Huawei Nova 2. mpikambana vaovao ao amin'ny fianakaviana Nova 2, miaraka amina vatana aluminium ary fitaovana matanjaka.
Tsy ho ela i Huawei dia hanolotra ny sainam-piangonany vaovao, ny Huawei Mate 10, ary io no fantatsika momba ilay finday avo lenta vaovao
Tonga any Eropa ny Huawei Nova 2, fantatrao ve ny vidiny?
Ny Huawei Nova 2 vaovao dia tsy ho ela dia hipetraka eto amintsika mba hifaninana amin'ny sokajy sarotra, ary toa mety ho sakana ny vidiny
Ny horonan-tsary teaser voalohany an'ny Huawei Mate 10 dia manasongadina ny fakantsary roa an'ny finday
Ny teaser horonantsary voalohany an'ny Huawei Mate 10 dia manome antsika sary vitsivitsy nalain'ny phablet ho avy miaraka amin'ny rafitra fakan-tsary dual camera ao Leica.
Huawei dia mivarotra mihoatra ny Apple any Eropa
Huawei dia lasa mpanamboatra faharoa lehibe indrindra any Eropa ao ambadiky ny Samsung ary mamela an'i Apple amin'ny toerana fahatelo
Ny orinasa sinoa Huawei dia mandefa ny fanasana ho an'ny hetsika haino aman-jery amin'ny 16 Oktobra any Alemana izay hanolorany ny Mate 10 vaovao
Taorinan'ny fivoahana tato ho ato dia efa ananantsika ny sary voalohany sy ny sasany amin'ny famaritana ara-teknika ny phablet Huawei Mate 10 ho avy.
Honor 8 Pro, fanadihadiana ary hevitra
Fanadihadiana amin'ny horonan-tsary sy amin'ny Espaniôla an'ny Honor 8 Pro, phablet an'ny mpanamboatra Aziatika izay mamirapiratra noho ny hazavany noho ny efijery QHD.
Huawei dia hifantoka amin'ny fanaovana finday avo lenta
Tamin'ny resadresaka nifanaovana dia nanambara ny Tale jeneralin'ny Huawei fa ny orinasa dia hametraka ny ambany indrindra amin'ny sehatra mba hifantoka amin'ny farany ambony.
Fanadihadiana amin'ny teny Espaniôla an'ny Huawei Watch 2, smartwatch Huawei vaovao misy slot nano SIM sy GPS mifangaro
Efa nametraka kinova Android Nougat tsy voamarina ve ianao amin'ny Huawei P9 Lite anao ary fananganana fanandramana ny isa fananganana? Eto ianao manana ny vahaolana
Mitady telefaona tsara tsy latsaky ny 300 euro? aza adino ity fifampiraharahana ity miaraka amin'ny Honor 8
Ny Honor dia nampihena be ny vidin'ny Honor 8 ka izao ianao dia afaka mividy azy io mora kokoa noho ny hatramin'izay: 299 euro amin'ny alàlan'ny Amazon
Mbola tsy manana Android Nougat ianao ary miandry ny orinasanao telefaona handefa anao ny fanavaozana? Aza miandry intsony ary mifamadika amin'ny kinova maimaim-poana
Huawei dia nilaza fa nihoatra ny Apple tamin'ny varotra finday avo lenta
Araka ny tatitra vao haingana, Huawei dia milaza fa manana anjaran-tsena lehibe kokoa noho ny Apple, miaraka amin'ny varotra finday avo kokoa noho ny orinasa California.
Raha mbola tsy ankafizinao ny tombony azo amin'ny root ao amin'ny Huawei P9 Lite miaraka amin'i Nougat, manasa anao aho hanaraka an'ity lesona ity izay manazava azy tsikelikely.
Huawei dia manomana ny famoahana ny Honor Band 3
Huawei dia nanambara ny fanombohana ny Honorband 3 smartband amin'ny 12 Jona miaraka amin'ny smartphone Honor 9
Ny Honor 9 dia haseho amin'ny fomba ofisialy amin'ny 12 Jona ao Shanghai
Fivoahana vaovao no manondro ny 12 Jona ho daty ofisialy ofisialin'ny Huawei Honor 9 manaraka, finday avo lenta izay ho avy miaraka amin'i SoC Kirin 960.
Huawei dia manolotra ny takelaka MediaPad M3 Lite 10 miaraka amin'ny feo iPad Pro
Ny orinasan-tsambo sinoa Huawei dia mandefa vokatra vaovao, ny takelaka MediaPad M3 Lite 10, fitaovana maivana miaraka amin'ny fahaleovan-tena lehibe sy rafi-peo tsara
Ny orinasan-tsambo sinoa Huawei dia manolotra ny smartphone Huawei Nova 2 vaovao misy fakan-tsary roa sy fakan-tsary 20 megapixel eo aloha
Huawei P10 Plus, famakafakana ary hevitra
Fanadihadiana horonan-tsary sy amin'ny teny Espaniôla an'ny Huawei P10 Plus, ny sainan'i Huawei vaovao izay manana iray amin'ireo fakantsary tsara indrindra eny an-tsena
Honor 8 pro, ity no haingam-boninahitra Honor vaovao, izay misongadina amin'ny kalitaon'ny famaranana, ny herin'ny atiny ary ny rehetra amin'ny vidin'ny tantara ratsy: € 519
Manaja 6X, fanadihadiana ary hevitra
Famerenana horonantsary momba ny Honor 6X, telefaona antonony izay misy chassis aluminium, fitaovana matanjaka ary rafitra fakantsary fakan-tsary roa
Huawei dia mandefa ny Mate 9 amin'ny loko roa vaovao
Ny Huawei Mate 9 dia ho hita manomboka amin'ny 14 Mey any China amin'ny famaranana loko mareva-doha roa, Agate Red sy Topaz Blue.
Ny Huawei Nova 2 dia efa manana ny fanamarinana TENAA
Ny Huawei Nova 2 dia mahazo ny fanamarinana ny TENAA any Shina ary mamela antsika hahafantatra zavatra bebe kokoa momba ny toetrany sy ny tombontsoany
Huawei dia manavao ny ankafizinao 7 Plus miaraka amin'ny RAM 4GB sy fitehirizana 64GB
Folo andro taorian'ny nanombohany, Huawei dia manavao ny Enjoy 7 Plus miaraka amin'ny kinova 4GB sy fitehirizana anatiny 64GB
Huawei dia manaiky ny fampiasana chip isan-karazany amin'ny finday P10 sy P10 Plus finday
Huawei dia nanaiky tamina fanambarana iray fa mampiasa RAM isan-karazany sy chip fitadidiana fitehirizana ao amin'ny finday P10 sy P10 Plus
Honor 8 Pro, ity no mpamono olona vaovao an'i Huawei
Ity ny Honor 8 Pro, ny sainam-bokin'ny mpanamboatra izay tsy ampoizina amin'ny toetra ara-teknika izay midera azy eo an-tampon'ny sehatra
Galaxy S8 vs Huawei P10, ny fahasamihafana misy eo amin'ny roa amin'ny Android tsara indrindra
Aza adino ity famakafakana fampitahana feno ity eo amin'ny Samsung Galaxy S8 sy Huawei P10, roa amin'ireo finday avo lenta farany tsara indrindra
Huawei P10 vs Huawei P9, mendrika ny fanovana ve izany?
Izahay dia manao fampitahana eo amin'ny Huawei P10 sy ny Huawei P9 mba hahitanao ny fahasamihafana rehetra misy eo amin'ny sainam-pirenena ankehitriny sy ny teo alohany
Ny fakantsary roa an'ny Huawei P10 dia tsy ampoizina ao amin'ny DxOMark fa mbola tsy tafihoatra ny Google Pixel
Huawei P10 dia nahatratra 87 isa tao amin'ny DxOMark, nandresy ny iPhone 7, na dia tsy naharesy ny Google Pixel na ny Galaxy S7 Edge aza.
Honor 9, Huawei dia manomana vaovao amin'ny 5 aprily
Ny orinasa sinoa Huawei dia manomana hetsika manokana amin'ny 5 aprily ho avy izao, ary ny zava-drehetra dia manondro fa fanokafana ofisialy ny Honor 9.